dimanche, 30 juin 2019 23:10
Kitra-CAN 2019: Voahosotra ho mpilalao mendrika i Carolus
Voahosotra fanindroany ho mpilalao mendrika i Carolus, taorian'ny lalao nandresen'ny Barea 2 noho 0 an'i Nizeria androany.
Carolus no nampiditra ny baolina faharoa tamin'ny lalaon'ny Barea androany tao Alexandrie. Bôlida no nampidi-baolina voalohany.
Vita ary notokanana omaly ny fantsona lehibe fitaterana rano fisotro madio ho an’ny tambazotra Ampotaka - Tsihombe - Faux Cap. Kaomina enina (Marolinta, Beloha, Tranovaho, Marovato, Nikoly ary Faux Cap) sy fokontany 21 (Mahafaly, Tanalavabe, Kirimosa, Zandroe, Sampeza, Bevaro Ambony, Beloha Nord, Barabay, Tranovaho, Lavanono, Soamagnitse, Beza, Ambalanosy, Ankororoka, Marovato, Soramena, Nosy Ala, Antanamalagny, Nikoly Centre, Bereny ary Amanda II) no voakasik’ity tetikasa ity, izay efa natomboky ny fitondrana teo aloha.
Vahoaka miisa 30 000 no hisitraka mivantana ny fahazoana rano fisotro madio, miampy ireo olona 40 000 isa manodidina, avy ao amin’ny distrikan’i Beloha Androy sy Tsihombe.
dimanche, 30 juin 2019 14:44
Amboasary Atsimo: Miteraka resabe ny fomba fiasan'ny kalôny
Notondroina ho malaso ireto roalahy amin'ny sary ireto, mpianatra kilasy "terminale" amina sekoly tsy miankina iray eto Amboasary ny iray matory misaron-damba amin'ny sary, "gardien" ny trano nisy azy ny faharoa mipetraka.
Nosamborin'ny kalôny, izay sivily, ary misy malaso niova fo no ampisahanana ny fandriampahalemana eto Amboasary. Niharan'ny vono izy roalahy ireto, tsy nandalo Fitsarana na fanadihadiana hamantarana na meloka na tsia, izy roalahy rahateo milaza fa tsy nanao ratsy.
Nisy fahoriana tao Tsilanja, Fokontany Tanambao eto Amboasary Atsimo telo andro lasa zay. Vao avy nahavaky safira 24 tapitrisa Ariary io olona maty io, ka io vola io no anaovana havoria.
Notafihin'ny andian'olona fito na valo teo io tokatrano misy fahoriana io ny zoma lasa teo, ary nandrahona sy nitaky "aboahy ny vola".
dimanche, 30 juin 2019 14:00
Santatra: Nilaozan'ny zokiny aty Morondava, nefa marary saina
Izy no Santatra, zazalahy avy any Toamasina naterin'olona tao amin'ny biraon'ny sampandraharahan'ny Mponina eto Morondava.
Araka ny voalazany dia narian'ny zokiny teto Morondava izy, raha avy any Toamasina izy ireo, ka tsy hita ny zokiny.
Somary tsy dia salama saina i Santatra, ka nantsoin'ny Talem-paritry ny mponina eto Morondava ny tompon'andraikitry ny Akany mpitaiza zaza kamboty eo Tsimahavaokely mba hitaiza azy. Olana ho an'ny Akany anefa ny mitaiza an'i Santatra noho izy tsy dia salama saina ka anaovana ombay mitady ny Ray aman-drenin'i Santatra, na izay mahalala ny havany.
dimanche, 30 juin 2019 13:30
Ampasy Morondava: Nahazo rano mpifindra monina
Natolotra ireo mponina maherin'ny 120 avy any Antsakamirohaky sy Ambalorao nifindra fonenana ao Antanavao Ampasy, Kaominina ambonivohitra Morondava ny paompy japiny iray avy amin'ny Rotary Club Baobab Morondava.
Nampanantena ireto farany fa hanamboatra paompy faharoa ho an'ireo mponina ireo, ary hanamboatra kopia fahaterahana ho an'ireo ankizy madinika.
Hojerena manokana ihany koa ny fomba hampianarana ireo ankizy kely izay tokony hianatra amin'ny "préscolaire" satria telo kilometatra avy eo vao tonga eny amin'ny EPP Ampasy, ka sarotra ho an'ireo ray aman-dreny ny handefa ny zanany.
Nanome voninahitra izany taty an-toerana ny Governoran'ny Rotary District 9220, ramatoa Shelly Oukabay.
Feno dimy taona izao ny Rotary Morondava, tafiditra amin'izany ity hetsika ara-tsosialy ity narahina fandraisana mpikambana vaovao.
dimanche, 30 juin 2019 13:18
Faty telo hita tao Ampitatafika: Hotsaraina amin'ny Talata 2 jolay ireo miaramila 27 lahy voarohirohy
Nafindra vonjimaika ao amin'ny fonjan'Antanimora ny 20 amin'izy ireo, mbola ao Tsiafahy kosa ny 7.
Hotsaraina amin'ny talata izao ireo miaramila 27 lahy voarohirohy tamin'ny famonoana lehilahy telo hita faty tao anaty ranonin'i Onive ao Ampitatafika, Distrika Antanifotsy, ny 30 mey 2019.
Re fa hisy fivoriana ireo miaramila eny Ivato rahampitso hanomana ny hiatrehana io raharaham-pitsarana io.
dimanche, 30 juin 2019 13:13
Kitra-CAN 2019: Madagasikara # Nizeria
Hiatrika lalao fahatelo ao amin'ny vondrona B misy azy ny Barea an'i Madagasikara anio alahady 30 jona. Hifandonana aminy amin'izany ny Super Eagles Nizeriana.
Efa tafita mialoha ny fotoana amin'ny ampahavalon-dalana i Nizeria taorian'ny fandresena roa azony tamin'ny lalao roa nataony. Laharana voalohany vonjimaika ao anaty vondrona izy.
Ady sahala no vokatra tsy mampitaintaina an'ny Barea hiakarana amin'ny dingana manaraka, raha mahazo fandresena vao maika tsara.
Miankina amin'ny vokatra azon'ireo ekipam-pirenena hafa kosa ny tohin'ny dia raha toa resin'i Nizeria isika, ary etsy ankilany mandresy an'isa an'i Burundi i Guinée izay samy ekipa iray vondrona B amin'i Madagasikara.
dimanche, 30 juin 2019 13:12